Sharciga Dalxiiska: Siyaabaha Loogu Xidho Dalxiis ahaan Imaaraadka | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Siyaabaha Loogu Qabto Dalxiis ahaan UAE
meel caan ah
Imaaraatka Carabtu waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo aado fasaxa adduunka, dalxiisayaal badana waxay safaro qurxoon u aadayaan dalka carbeed si ay ugu raaxaystaan ​​uguna duugaan lacagaha kaashka ah ee soo jiidashada, dukaamaysiga, iyo nashaadaadyada kale.
caqli yeelo si aad wax uga ogaato sharciyada deegaanka iyo caadooyinka
shuruucda maxalliga ah ee UAE
markasta la jaan qaada nidaamka sharciga
In kasta oo Imaaraadku uu yahay meel caan u ah dalxiisayaasha, xorriyadda ayaa xadidan. Waxa jira waxyaabo lagu xiri karo ama lagu xidhi karo. Marka waxaa haboon in la ogaado shuruucda maxalliga ah iyo caadooyinka oo la ixtiraamo si had iyo jeer aad ula jaan qaado nidaamka sharciga. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha aan laguu oggolayn inaad sameyso markii aad joogtid Imaaraadka.
Qoob ka ciyaarka Dadweynaha
Qoob ka ciyaarka dadweynaha waxaa loo arkaa inay dambi ka tahay Imaaraadka. Waxaa loo arkaa inay carqalad ku tahay nabada bulshada, taas oo lagugu xiri karo. Waxaa jira habeenno badan iyo naadiyo qoob-ka-ciyaaraya oo dalxiisayaashu u isticmaali karaan isticmaalka.
Waa sharci darro in la soo dhoofiyo wax soo saarka hilibka doofaarka iyo sawirrada sawir-gacmeedyada Imaaraadka. Sidoo kale, buugaagta, joornaalada, iyo fiidiyowyada waa la baari karaa waana la faafin karaa.
Dembiyada la xiriira daroogada si weyn ayaa loo daaweeyaa. Waxaa jira ganaaxyo adag ee ka ganacsiga daroogada, tahriibinta, iyo haysashada (xitaa qadar yar). Waxaa jira ciqaab dil ah ka ganacsiga daroogada iyo ugu yaraan 4 sano oo xabsi ah haddii xitaa laga helo xaddiga ugu yar ee daroogada sharci darrada ah. Sidoo kale, jiritaanka daroogada ee ku jirta dhiigga dhiiga ayaa waxaa u tixgeliya mas'uuliyiinta Emirati inay yihiin hanti ahaan. Qaar ka mid ah alaabada daryeelka maqaarka iyo kafeega-sigaarka ayaa laga yaabaa inay ku jiraan maadooyin ay ka mid yihiin saliida CBD ee loo arko inay sharci darro ka tahay Imaaraadka Carabta. Haddii la helo, waa lagala wareegayaa, mulkiiluhu wuxuu la kulmi karaa dacwado dambi ah.
Waxaa jira xayiraad ku saabsan qaadashada aalkolada guud ahaan Imaaraadka. Muslimiinta looma oggola inay khamri cabbaan, dadka aan muslimka ahaynna waxay u baahan yihiin laysan khamri si ay ugu awoodaan inay khamriga ku cabbaan guriga, ama meelaha rukhsad u leh. Magaalada Dubai, dalxiisayaashu waxay ka heli karaan laysanka khamriga muddo hal bil ah laba ka mid ah shirkadaha sida rasmiga ah u iibiya khamriga ee Dubai. Ruqsaddan ayaa kaliya lagu isticmaali karaa Emirate-ka halka la bixiyo. Sidoo kale, xitaa haddii laysanka laysanka khamriga lagu cabo meelaha la xusho sida hoteelada, naadiyada, iyo makhaayadaha. Khamriga ama ku sakhradda dadweynaha waa la ciqaabaa sharciga UAE.
Waxaa lagugu xiri karaa UAE markii aad u labisato si aan qarsoodi ahayn dadweynaha. Haweenka waxaa lagula talinayaa inay si xariif ah u labistaan ​​oo ay u daboolaan meelaha xasaasiga ah ee jirkooda ku yaal meelaha dadweynaha sida suuqyada wax lagu kala iibsado iyo beeraha nasashada. Gacmaha iyo lugaha waa in lagu daboolo maro, dharka hoosta waa in la qariyo. Dharka dabbaasha waxaa loo oggol yahay oo keliya xeebaha iyo barkadda dabbaasha. Waa sharci darro in la labbisto
Dhaarashada, sameynta boggaga warbaahinta bulshada ee ku saabsan Imaaraadka iyo sameynta ficillada xun ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa xumeyn ah, iyo in dambiilayaashu ay la kulmaan waqti xabsi ama masaafuris. Sidoo kale, muujinta muuqaalka jaceylka dadweynaha looma dulqaadan karo, dalxiisayaal badan ayaa loo qabtay iyaga oo gacmaha is haysta ama dhunkanaya dadweynaha.
Xiriirka ka baxsan guurka
Waa sharci darro inaad galmo ku sameysatid guur ka baxsan iyadoo aan loo eegin xiriirka aad la leedahay lammaanahaada ka baxsan Imaaraadka. Haddii la ogaado inaad leedahay xiriir galmo oo ka baxsan guurka, waa lagu silcin karaa, lagu xiri karaa, ama / lagu ganaaxi karaa oo lagu masaafurin karaa. Sidoo kale wada noolaashaha ama qolka la wadaagga qof kale oo jinsi ah oo aadan ahayn qof aan isqabin ama xiriir dhow kuu ah waa sharci darro.
Faa'iidooyinka Shaqaaleynta Garyaqaan
Haddii aad waligaa u baahan tahay inaad ka doodo sharciga UAE, markaa waa inaad heshaa caawimaad qareen. Wakiilka sharciga ahi wuxuu noqon doonaa mid caawimaad weyn leh, gaar ahaan maadaama aysan had iyo jeer u sahlanayn dadka soo booqda inay raacaan dhamaan qawaaniinta iyo qawaaniinta jira. Kiraysiga qareenku wuxuu bixiyaa faa iidooyin badan, waana kuwan qaar:
l Garyaqaannadu way yaqaaniin sharciyada dalka, wayna fahmayaan dhammaan hababka sharciyeed ee laga yaabo inaadan aqoon u lahayn. Waxay yaqaanaan dukumiintiyada sharciga ah ee saxda ah ee la xareeyo, iyo farsamooyin sharciyeed oo lala kulmay.
l Garyaqaan khibrad leh ayaa wax ka qaban lahaa kiisas badan oo kuwaaga oo kale ah, sidaa darteed wuxuu sameyn karaa qiyaas aqoon leh inta dacwaddaadu ay gaari karto, ama sida dacwaddaada loo xallin karo.
l Garyaqaan xirfad leh ayaa kaa caawin doona buuxinta dukumiintiyada sharciga iyo waraaqaha kale ee muhiimka ah si sax ah.
Qareenka shaqadiisa kaliya ma ahan inuu kaala taliyo arrimaha sharciga, waxay sidoo kale ku siin karaan talo ku saabsan gargaarka niyadda. Waxay fahmayaan culeyska xaaladdu kugu keeni karto waxayna ku siin karaan talo kuu dejisa oo maskaxdaada kuu fududeysa. Intaas waxaa sii dheer, mudnaanta qareenka-macaamilku waxay hubinayaan wax kasta oo aad u sheegto qareenkaaga in loo ilaalin doono si qarsoodi ah.
Imaaraadku waa dalxiis aad u weyn, laakiin waa inaad taxaddar muujisaa maadaama waxyaabo yaryar ay kugu ridi karaan websaydhyada awoodda. Faa'iido weyn ayaad uheleysaa hadaad taqaanid shuruucda, caadooyinka, iyo dhaqanka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad wax xumaato, hubso inaad hesho caawimaad xirfadle sharci khibrad leh si aad u xalliso dhibaatada.
Waxaa jira xallin dhibaato kasta oo xagga sharciga ah